Nezvedu - Hangzhou Zvirinani Mazuva ese Zvigadzirwa Co., Ltd.
Zvirinani Mazuva ese Zvigadzirwa Co., Ltd.
Yakagadzwa muna 2015. Isu tiri kambani iri kuita OEM neODM kugadzirwa kwemazuva ese-kushandiswa zvigadzirwa.
Professional akaigadzira nyoro ndokupisika.
Isu tinotarisa pane kutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa kweanopukuta nyoro emapoka akasiyana. Yedu nyoro yekupukuta zvikamu zvinosanganisira doro mapukuta, disinfection pukuta, kuchenesa pukuta, makemikari anobvisa pukuta, mucheche kupukuta, mota kupukuta, zvipfuwo zvinopukuta, kicheni zvinopukuta, yakaoma pukuta, kumeso kupukuta, nezvimwewo Panguva imwecheteyo, isu zvakare tine chigadzirwa chakateedzana senge ruoko sanitizer uye masiki. Isu tinopa zvakagadziriswa masevhisi kune vatengi vedu. Isu tinotarisa pamitsara mitatu yakasiyana yebhizinesi inounza yakakwira mwero wekukosha kune vatengi vedu sekunge pasina imwe kambani yemakemikari. Yedu yemubatanidzwa motto ndeye "Kudzivirirwa, R&D uye Sevhisi".
Tine marezinesi ekunze uye ekunze. Kodzero yekutengesa zvigadzirwa zvedu inovimbiswa. Zvigadzirwa zvedu zvakanyoreswa neEPA, FDA, MSDS, EN, CE uye zvimwe zvitupa. Kana iwe uine zvimwe zvitupa zvinodiwa, isu tinoda kwazvo kutaurirana newe kuti upedze;
Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa pasi rese. Takazvipira kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi echiratidzo chega chega.
Zvirinani Zuva Nezuva Zvigadzirwa Co, Ltd. ine inodziya uye inoshamwaridzika timu yeaneruzivo mahunyanzvi mukugadzirwa, kutengesa, kutakura kwepasirese uye manejimendi manejimendi, maviri acho ane anopfuura makore gumi ehunyanzvi hwebasa rebasa. Isu takagamuchira rumbidzo yakawanda kubva kune vatengi nekuda kwekukurumidza uye nekufunga kwedu sevhisi nekuda kwezvinhu zvedu zvemhando yepamusoro uye timu yekutengesa inoshanda.
ZVAKANAKA zvinopa zvakanakisa masevhisi emazinga uye anotsigirwa nemitengo yedu yekuvimba, kuvimbika uye kuda kwemhando yepamusoro. Ichi ndicho chikonzero vazhinji vevatengi vedu vakave vakavimbika kwemakore mazhinji. Tagara tichiita basa rakakura.